Ogaden News Agency (ONA) – Warbixin: Tababarki 2aad ee Jaaliyada Ogadeniya ee Victoriya oo maanta furmay.
Warbixin: Tababarki 2aad ee Jaaliyada Ogadeniya ee Victoriya oo maanta furmay.
Tababarkii Usocday Jaaliya Soomalida Ogadenia ee Victoria oo Dib u bilowday maanta.
Waxaa maanta oo ay ku beegan tahay taariikhdu 11/11/2012 dib u bilowday Tababarkii u socday jaaliyada Soomaalida Ogadenia Community ee victoria halkaas oo dhamaan jaaliyada qaybaheeda kala duwan ay ka soo qayb galeen sida Ururka Haweenka, Ururka dhalinyarada OYSU Melbourne , iyo Odayaasha.
Waxaa tababarka bixinayeey Marta Oo ka socota Dawlada tababarkan oo socondoona in mudo ah.
Tababarkaan ayaa wuxuu kusaabsanaa sida loo’abaabulo xafladaha iyo waxyalaha jaaliyada hormar gaarsiinkara. Waxaa tababarkaan aad uga sooqeybgalay ururka haweenka oo run ahaantii wax badan ku kordhiyay xaga fikirkooda.
Waxaa qaybta turjimada dadihinayeey Mudane C/rahmaan raabi oo ka mid ah aqoon yahanada ree Ogadenia.
In taas ka dib waxaa madasha Tababarka ka soo jeediyay hadalo kooban gudoomiyaha jaaliyada mudane Hikam oo aad iyo aad ugu soo jeediyay amaan jaaliyada ka soo qayb gashay qaybaheeda kala duwan wuxuuna yidhi tababar kanni wuxuu wax ka tari doonaa wax yaabo badan oo ay jaaliyadu u baahnayd waa sida uu hadalka u dhigaye. wuxuna sii raaciyay in todobaadka dambe ay ka soo qayb gali doonaan wasiiro dowlada Australia ka socda.
waxaa isna hadal dhiiri galin ah kula dar daarmay jaaliyada maxamed faray oo ka mid ah odayaasha ogadenia yidhina isku duubnida ayaa wax lagu qabsadaa. Waxaa kalo ka hadlay tababarka Gudoomiya Odayasha oo kula dar daarmay dhamaan bulshada isku xidhnaan iyo wada shaqayn . Waxaa kalo Tabbarka ka hadlay aqoon yahamo kasoo jeeda Ogadeniya o runtii talo bixin iyo waayo aragnimo badan ku biiriyay tababarka kana hadlay sidii looga faa ideysan lahaa.
Tababarkan oo ah oo ah mid wax wayn ka taraya sida bulshada loo hogaamiyo sida jaaliyadaha kale loo wada shaqeeyo sida dhalinyarada looga caawiyo shaqa halista iyo sidii loo hormarin lahaa xidhiidhka ka dhexeeya jaaliyada Dawlada Australia ayaa jawi fican ku dhamaatay, qaybtiisa sadexaadna bilaabmi doonta 18 November 2012.